Qeerroon Oromoo: Roorroofi Hacuuccaa Ilmaan Oromoo Warshaa Eastern Industry Zone jedhamu keessa hojjetan irratti hammachuu irraa Hojjettootni – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsQeerroon Oromoo: Roorroofi Hacuuccaa Ilmaan Oromoo Warshaa Eastern Industry Zone jedhamu keessa hojjetan irratti hammachuu irraa Hojjettootni
Qeerroon Oromoo: Roorroofi Hacuuccaa Ilmaan Oromoo Warshaa Eastern Industry Zone jedhamu keessa hojjetan irratti hammachuu irraa Hojjettootni Warshaa kophee Huajian hojjetaniifi kanneen Warshaa uffata Jiinsii Omishuu keessa hojjetan caamsaa 11/2018 Gaaffii mirgaafi hacuuccaafi roorroon hojjettoota warshichaa irra gahaa jiru nurraa haa dhaabbatu jedhanii gaafachuun walqabatee namoonni 6 ol waraana komaandii postii wayyaaneetiin ukkanfamanii waan hidhamaniif hojjettootni hojii dhaabanii jiru.
Gaaffiin isaan gaafatan:
1. Yeroon hojii nuuf kennameefi miindaan hojii hojjetnuun nuuf kanfalamuu takkaa kan wal madaalu miti, yeroo hojii sa’aa 1:30 seennee sa’aa 12:20 baana sa’aatii 10 hojjetnee ji’atti mindaan nuuf kanfalamu qarshii Ethiopia 960 qofa , hojiin hojjetnuufi mindaan nuuf kanfalamu takka kan wal argu waan hin taaneef miindaan nuuf haa dabalamu, ykn immoo sa’aatiin hojii nuuf haa hir’atuu jechuun gaafatan.
2. Waraanni komaandii Poostii warshaa keessa qubsiifamee jiruu galgalaa ganama maqaa sakkatta’insa jedhuun qabeenyaa akka mobiliifi qarshii shayee ittin dhugnu nu saamaa jiru, ijoollee shaamarranii irratti yakka dirqisiisanii gudeedii rawwata waan jiraniif mooraa warshaa gadhiisanii nurraa haa bahan kan jedhu ,
3. Hojjettoota warshaa Eastern Idustrail keessa hojjetnu maashiniin midhaa qaamaa hojjettootarraan gahee dhaabbatni kun Insurancy kanfaluufi yaalchisuuf utuu dirqama of irraa qabuu namootni miidhaan irra gahee yaalaafi isurancy dhorkatamanii qaamaa naafachaa jiraniif Eastern Industry kun itti nuuf haa gaafatamu.
4. Nyaata qulqullina hin qabne nuuf dhiyeessuun dhibeef saaxilamaa waan jiruuf nyaatni nuuuf dhiyaachaa jiruu ogeessoota fayyaan nuuf haa qoratamu
Kanneen jedhu gaaffii isaanii karaa nagaa dhiyeeffatanii utuu jiranii waraanaa agaazii reebaman. Kanneen gaaffii dhiyeessan namoonni hidhuun hidhatti darbamanii jiru.
Biyya abbaa keenyaa keessatti hojii guyyaa illee hojjetnee jiraachuuf mirga dhabnee roorrifamaa waan jirruuf guutummaatti hojii dhaabuun mirga keenyaaf falmachuun dirqama nutti ta’eera jechuun Qeerroon Magaalaa bishooftuu gabaasera!!
Uummanniif qeerroon oromoo Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu dhugaa dubbachuuf goota ijaa barbaadaati.
Qeerroon Oromoo guyyaa har’aa jechuun 14/5/2018tiitti du’a qeerroo Olii Margaaf marii gochuuf walga’e irratti
bulchitoonniif kumaandi poostiin godinichaa humnaan itti deemuuf yaalus
Qeerroon keenya cichoominaan dura dhaabachuun kaayyicha fashalsee jira.
Dubbiin bitaa gaafa itti galtu hangoonnis humna dhiisanii gara kadhaatti fuula galagalfatan.
Achiis qeerroodhaan rakkoon keessa maali jedhan.
Qeerroon ija barbadaa akkana jedhe.
Waraana magaalaa kanaa baasaa.
OPDOnis nurraa callisaa.
Kana gochuu baannaan nuti uumnannif qeerroon eeboo, qottoo, dhagaa, boombii, qawweefi waan qabnu maraan kanee biyya keenya kabachiifanna. Gumaa ilmaan keenyaas baafanna jedhan.
Amma yeroo barruun kun katabamu hangoonni OPDO Gidinichaa dafqa du’aa ofirraa dhangalaasa waan qabduuf gadhiistu wallaalaa jirti.
Qeerrookoo itti muddi.
Injifannoon kan qeerroo oromooti.